Sei isu - AlorAir
Sei Ndichizvicheka Kuva Dehumidifier?
Kufambira Mberi zvemichina kwete chete kuzvimanikidza vanhu mberi, asi kusimudzira ruzivo rwedu nazvo. Izvi zvinoreva kuti munhu mukuru kunyatsoshanda dehumidifier anogona kubatsira vanhu vane dehumidification dzedenga, uyewo kuderedza ramangwana yokuzvigadzirisa mari. Somuenzaniso, zvakawandisa mwando kungaita kuti anodhura kuvadza marongerwo uye zvinoumba pachivako.
Zvakawandisa mwando munogona hwomunhu Kubasa kana mhenyu ezvinhu. Nepo yakapfuura akafunga kuva dzinongoitika chakajairika, zvino tinoziva kuti tinokwanisa kudzivirira zvinokonzerwa zvakawandisa unyoro.
► kupi here kuunyoro hwakawandisa Yakabva?
Zvichienderana mumhepo tembiricha, mhepo anogona kuchengeta imwe yakawanda mvura iri vaporous ezvinhu. Kana mhepo inotonhodza, kukwanisa wayo kuchengeta mvura shoma maererano. Izvi zvinoreva kuti mhepo anosunungura zvakawandisa mwando kune chando pamusoro, izvo anosika dampness uye condensation isu vanoziva.
► Sei Sarudza Dehumidifiers kuti kuunyoro hwakawandisa?
Wooden zvivako zviri kubatwa Foroma uye ora. Over nguva muforoma uye ora kungaita kuti nyaya dzakadai kuvhiringidzika Uriri uye gogonera musuo mapuranga.
15% of kugadzirisa huni zvikamu zvinokonzerwa ora uye chakuvhuvhu. Izvi zvinotungamirira anenge mabhiriyoni 20 tsoka namatanda kuparadzwa, riri kupfuura chii wakaremara nomoto.
Exterior masvingo vanogona kufungisisa mwando nyore pamusoro hukawanika dzavo. Kana pamusoro tembiricha kunoderedza zvakatonyanya, mamwe mvura wefodya, zvoita kuti kukuvadza kutenderera.
Dehumidifier achaita kusvina kunyanya mwando kubva zvakatipoteredza uye kubatsira kuchengeta zvinhu panguva yakakodzera mwando pamwero. Izvi zvinobatsira kuderedza kuvariritira mari uye kuchengeta kukuvadza muforoma ari mashoma.
Ngura nesimbi rinowanzoberekera nokuda zvakawandisa mwando. Household midziyo yemagetsi uye nemagetsi zvinoriumba havagoni kushanda kana ivo Sechipanji mwando yakawandisa kubva mumhepo. Food, mushonga, mabhuku, uye zvipfeko tiri pangozi kukuvadza uye anogona zvavhuvha kubva dampness.
Dehumidifier anogona kupa misoro kugadzirisa zvose matambudziko ako okuchengetera. Achiedza kwekuva inoshanda, kutsanya kuita AlorAir dehumidifiers zvinoita kuti zvose zvauinazvo achitarisirwa zvakanaka.
Nyorova ezvinhu zviri zvikuru rikwezve tupembenene twakaita mujuru, masvosve, uye mapete, kazhinji vanogara mumba menyu asingabatwi kwenguva. Izvi chipembenene infestations zvinogona dzinokuvadza kumba kwako uye utano.
Dehumidifier anogona kuramba nyore hwomutambarakede mwando pamwero kuti vapenyu renyu uye basa nzvimbo. Achiparadzira yakaoma uye vakasununguka mhepo, unogona kuderera chipembenene infestation uye kuvandudza mhepo yepamusoro.
Indoor hama mwando kwevari 60% kana kupfuura kuchawedzera zvikuru mikana chakuvhuvhu, nokuvhuvha, uye hunokuvadza, izvo zvahunokura huni, tsvina, makadhibhokisi, uye mapepa.
Sezvo chakuvhuvhu Anopararira, izvozvo anosunungura mamiriyoni spores mumhepo. Izvi zvinotungamirira musty, uye mamiriro munhuhwi, kuwedzera kuwedzera mikana ezvinhu ngozi utano.
A dehumidifier anogona zvinobudirira kuchiderera indoor mwando, kuti wako mupenyu ezvinhu vasununguka, uye kuderedza mukana zvirwere zvakakomba.
Tinoda kuti Innovate!
AlorAir inopa dzinotevedzana yemhando IAQ uye dehumidification zvinogadzirisa kuburikidza dehumidifiers, mhepo nevaikonzera, mhepo scrubbers, uye zvakawanda. Our itsva zvinogona kushandiswa mafomu zhinji kubvira maindasitiri kune dzinogarwa. Basa redu kuti haana kurega innovating ari zvigadzirwa isu ape vatengi vedu.
The Coils musi AlorAir dehumidifiers akakura kupfuura Coils ane kwakajairika dehumidifier. Uyezve, mashoko coils uye zenze magadzirirwo zvinosanganisira rakasiyana zvinhu zvisingagoni kuwanikwa musi isingadhuri, vakawanda yabereka dehumidifiers. The oversized coils nokupisa exchanger anogona kubvisa 2-3 zvakawanda kakapetwa mwando paminiti kilowatt sechinhu kwakajairika dehumidifier. AlorAir zvaJehovha zvikuru vakarongeka dehumidifier anoponesa kusvika $ 250 pagore mune simba yokufambisa uye achaita yemanyorero kwemakore 10+ ane gore mashanu shoma garandi.
► Epoxy Powder unhani pamusoro Coils
Kuti tidzivise Freon leakage, chirwere chinouraya, icho kuti dehumidifier, AlorAir akaita akasuma epoxy zvemapuranga Coils. Izvi itsva chinhu kunosvika upenyu Coils nokuvapa kudzivirira kungatikanganisa runyararo uye tiine coils wacho kupisa transferability. Uyezve, mukuru kushanda muhombe compressor chendangariro kunonyanyisa zvinobudirira panguva yepasisa zvichibvira mutengo.
Pumps kazhinji vane nyaya dzakakomba dzakadai sokupisa, kuonekwa kukundikana, uye rusting. Luckily, mainjiniya edu zvakagadzira pombi kuti zvakawanda hwakavimbika. Ane 20 'kusimuka kure, condensate pombi kunokupa rusununguko wopedza kwese.
netambo All musi AlorAir kuti condensate pombi vane anokurumidza Connect plugs. Izvi zvinoita chokugadza kuvariritira kutsanya uye nyore.
► Quick Access kuna Internal zvinoriumba
All AlorAir dehumidifiers zvinopa nyore kuwana pezviri zvinoriumba. The Storm Series ane clamshell butiro ukuwo Sentinel Series iri vakapakata kuwana aenzana. Mukuwedzera, pombi ane nokukurumidza Connect netambo, saka inogona nyore kubviswa pasina kuwana kudzorwa bhodhi.
Our humidistat kure kunoita AlorAir dehumidifiers akakodzera kusarudzwa, apo chikwata chichange ducted kupinda imwe kamuri. The humidistat zvakare inobudisa optioneel mutsinga dzinofamba nemukaka akatasva flanges, izvo kuderedza nguva chokugadza apo unobatanidza munhu ducting hurongwa.
► Switch pamwe yokunzvenga Air Design
All AlorAir dehumidifiers zvinosanganisira mwando Switch pamwe yokunzvenga Air Design, izvo kunotadzisa pfupi kuchovha. Sensors chinogona kuonekwa kukanganiswa munyika kupisa uye mwando, nokuvaita asingatani kugamuchira zvakaipa anonongedzera kuti simba iri kana kure. Izviwo shortens ari lifespan pamusoro compressor uye kunoita refrigerant gadziriro kugadzikana. Kuti tikurire nyaya iyi, iyo yokunzvenga Air Design anobvumira Switch kuti insulated zvachose kubva munyika pakupisa uye mwando.
Huru bhodhi rinogona zvinoshamisa kukanganisa chokupika dehumidifier yenyu. Nokuda kwaizvozvi, zvose AlorAir dunhu mapuranga vari zvemapuranga kudzivirirwa. The bhodhi iri tamper uchapupu uye husingakwanisi magnetization. The mativi uye chokupika nerimwe puranga vane 100% akaedzwa.
► Ductable Unit Chinoita Your Life Nyore
The mhuri AlorAir pamusoro dehumidifiers anopa nenhumbi nokuda siyana mafomu. The mutsinga dzinofamba nemukaka Kits kubvumira zviumbu kuti kuiswa iri kure nzvimbo, akadai zvokuimba kamuri, uye kuzvidzora neimwe kamuri mumba. Mune dzimwe nyaya, mumwe kure humidistat zvingava zvakakodzera.
Sei AlorAir Save You Mari?
Nokudzora mwando yomuropa mumba menyu kunokosha kudzivirira musha wako, utano, uye mhuri. An AlorAir dehumidifier chinhu risingadhuri matambudziko ako mwando. The kwokutanga mubhizimisi iri yemhando indoor mhepo yepamusoro inogona akapora pashure pemakore mashomanana simba mari.
Yakakwirira COP kuti AlorAir kuti dehumidifiers kukuponesai kusvika $ 250 muna simba mari zvichienzaniswa kwakajairika dehumidifiers. An AlorAir dehumidifier kuchaita yemanyorero yakareba makore 10+ uye anouya ane gore mashanu shoma garandi. Iwoyo projected mari chakakonzerwa namaneja kubva mukuderedza mhepo kutonhodza mari. Kamwe uchigona ndiine hama mwando 50% zvichidzika, HVAC wako asingadi kushanda nesimba kuti varambe hwomutambarakede tembiricha.
mari yako iri AlorAir dehumidifier haazorambi chete kupa simba nemari asi, zvichava uyewo kuumba vasununguka uye utano mhenyu nzvimbo.
New Uzit Re-vanotumira
AlorAir kuti mwanda mano kuti kudzorerwa uye kuchenesa:
Kuwana nzira yakanakisisa inogona rakaoma uye dzinovhiringidza nokuda zivo vatengi. AlorAir kwakasimbiswa vakawanda Kudzorerwa Packages kuti:
1. Dzosa kukuvara mvura
2. Speed ​​muforoma remediation
3. Temai pashure-mafashamo rechengetedzo mutariri